मानिसमा चन्द्रमाको आध्यात्मिक प्रभाव
२. चन्द्रमाको व्यापक सूक्ष्म (अमूर्त, intangible) प्रभाव
३.चन्द्रमाको प्रकाश अथवा चन्द्रमाकोकलामा आधारित परिणाम
४. चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणमा आधारित परिणाम
५. पूर्णिमा एवं अमावस्यामावृद्धि भएकोचन्द्रमाको प्रभावको परिणाम
६. मानव स्वभावमाचन्द्रमाको प्रभावको प्रमाण जुटाउनुमा वर्तमान रिपोर्टहरुकिन असफल छ ?
७. हानिप्रद परिणामबाट सुरक्षा पाउनकोलागि हामी के गर्न सक्छौं ?
गत केही दशक देखि मनुष्यको आचरणमा चन्द्रमाको प्रभावको समर्थन एवं विरोधमा अनेक वैज्ञानिक प्रतिवेदन दिएको छ । ती प्रतिवेदनमा मानसिक क्रियाकलापमा वृद्धि, सामान्य अथवा आपातकालीन मनोचिकित्सा विभागमा चाप वृद्धि तथा शारीरिक एवं मानसिक समस्यामा वृद्धिको शिकायतको विश्लेषण गरेको छ ।
स्पिरिच्युअल साइंस रिसर्च फाऊंडेशन (एस.एस.आर.एफ.) ले मनुष्यको आचरणमा चन्द्रमाको प्रभावलार्इ आध्यात्मिक अनुसन्धान पद्धतिद्वारा परीक्षण गरियो । मनुष्यको आचरणमा चन्द्रमाको प्रभाव पता लगाउनको लागि आध्यात्मिक अनुसन्धानको सम्क्षिप्त उत्तर हो, यसले मानवलार्इ प्रभावित गर्दछ । चन्द्रमा मानव जीवनमा कुन प्रकारले प्रभावित गर्दछ, यसको निम्नलिखित विभिन्न पक्षहरु छ –
तारा, ग्रह एवं उपग्रह सहित सर्व वस्तुहरु (पदार्थ) आफ्नो स्थूल तरङ्गको साथ सूक्ष्म (intangible) तङ्ग प्रक्षेपित गर्दछ । स्थूल स्वाभाविक विशेषता अनि सूक्ष्म-स्पन्दन न्यूनाधिक मात्रामा स्थूल तथा सूक्ष्म स्तरमा प्रभावित गर्दछ ।
चन्द्रमाबाट प्रक्षेपित स्पन्दन मनोदेह, अर्थात मानव मनलार्इ प्रभावित गर्दछ । मन, अर्थात सम्वेदना, भावना अनि इच्छा (वासना) । मनको दुर्इ भाग हुन्छ – चेतन मन अनि अवचेतन मन । अवचेतन मनमा अनेक संस्कार हुन्छ, जुन हाम्रो स्वभाव अनि व्यक्तित्व निर्धारित गर्दछ । हामीलार्इ हाम्रो अवचेतन (सुप्त) मनमा विद्यमान विचार एवं संस्कारका कुनै भान हुँदैन । यो संस्कार अनेक जन्मदेखि जम्मा भएको हुन्छ ।
मनको यो संस्कार हाम्रो विचार अनि त्यस अनुसार हुने क्रियाहरुलार्इ उत्प्रेरित गर्दछ । संस्कार तथा विचारको आफ्नो सूक्ष्म-स्पन्दन हुन्छ ।
मनमा विद्यमान संस्कार कुन प्रकारले हामीबाट कार्य गराउछ ? यो लेखको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
चन्द्रमाको स्पन्दन हाम्रो विचारको सूक्ष्म-स्पन्दनको तुलनामा अधिक सूक्ष्म हुन्छ; तर हाम्रो मनमा विद्यमान संस्कारको स्पन्दको तुलनामा अल्प सूक्ष्म हुन्छ । अन्तमनमा विद्यमान संस्कार द्वारा निर्मित विचारको स्पन्दनलार्इ बाह्यमनमा ल्याउने क्षमता चन्द्रमाको स्पन्दनमा हुन्छ । बाह्यमनमा निस्कदा हामीलार्इ थाहा हुँन्छ । यस प्रकार मनमा विद्यमान संस्कारको तीव्रता अनुसार व्यक्तिको आचरण प्रभावित हुन्छ । यसको विस्तृत स्पष्टीकरण अर्को खण्डमा दिएको छ ।
यस प्रकार चन्द्रमा पशुको मनलार्इ पनि प्रभावित गर्दछ । तर प्राणिहरुको अवचेतन मनमा आहार, निद्रा एवं मैथुन जस्ता मूल प्रवृत्तिका नै संस्कार हुन्छ, त्यसैले तीव्रतासँग आउने विचार पनि यी सहज प्रवृत्तिको अनुरूप नै हुन्छ ।
अमावस्याको दिन चन्द्रमाको अप्रकाशित, अर्थात अध्यारो भाग पृथ्वीतर्फ हुन्छ । अध्यारो मुख्यतः रज-तमात्मक स्पन्दन प्रक्षेपित गर्दछ । त्यसैले प्रकाशित भागको तुलनामा पृथ्वीतर्फ अधिक मूलभूत सूक्ष्म रज-तमात्म स्पन्दन प्रक्षेपित हुन्छ ।
सत्त्व, रज अनि तम, तीन मूलभूत गुण, यो लेखकोसन्दर्भ लिनुहोस् ।
यसको विपरीत, पूर्णिमाको दिन अधिक प्रकाशको कारण रज-तम अल्प हुन्छ; तर सूत्र २ मा बताए अनुसार पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाकोस्पन्दन अधिक कार्यरत रहनाले मानसिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पाइन्छ । अन्तर्मनमा जागृत भएको संस्कारको प्रकार अनुसार मानसिक क्रियाकलापमाकुनै अनियमित (अचानक आउने कुनै पनि) विचारमा अथवा कुनै विशिष्ट विचारको तीव्रतामा वृद्धि हुन सक्छ ।
उदाहरणार्थ, यदि कुनै व्यक्ति लेखक हो और पुस्तक लेखक्नमा मन केन्द्रित गरिरहेको छ भने पुस्तक सम्बन्धी उनको विचारमा तथा लेखन प्रतिभामा वृद्धि हुन्छ । यस प्रकारको विचारको उद्गम प्रतिभा केन्द्रबाटहुन्छ । त्यसैले उनलार्इ लग्छ कि पूर्णिमाको दिन उनी विपुल लेख्न सक्छ ।
तथापि अधिकांश व्यक्तिलार्इ मनमा अनियमित विचार आउदछ । यदि व्यक्तिमा क्रोध, लोभ जस्ता प्रबल दोष छ भने त्यो कालखण्डमा बाह्यमनमा आएर अन्य विचारलार्इ प्रभावित गर्दछ । उदाहरणार्थ, कुनै जडीयालार्इ यस दिनमा मद्यपान गर्नको लागि प्रबल विचार आउदछ ।
कुनै आध्यात्मिक व्यक्तिकोअन्तर्मनमा स्थित सुप्त आध्यात्मिक / साधना सम्बन्धी विचारलार्इ जागृत गरि मानसिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिकोफार्इदा उठाकर पूर्णिमाको दिन अधिक साधना गराउन सम्भव हुन्छ ।
पूर्णिमा अथवा अमावस्याको दिन चन्द्रमा अनि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण एकत्रित हुन जान्छ । अन्य दिनमापनि चन्द्रमा पृथ्वीलार्इ आकृष्ट गर्दछ; तर पूर्णिमा अथवा अमावस्याको तुलनामा यो आकर्षण यति शक्तिशाली हुँदैन ।
जब हामी गहिरो श्वास लिन्छौं, भने सामान्य श्वासको तुलनामा तीनगुना वायु मुखमा प्रविष्ट हुन्छ । अब यो उदाहरणलार्इ चन्द्रमा तथा त्यसले पृथ्वीमा खिचन्नेको सन्दर्भ हेर्छौं । पूर्णिमा अथवा अमावस्याको दिन पूरा चन्द्रमा पृथ्वीलार्इ आकर्षित गर्दछ । यसको परिणाम उपर्युक्त उदाहरणमा बताए अनुसार गहिरो श्वास लिनु जस्तै हो । हामीलार्इ यो ज्ञात भयो कि पृथ्वीको वलयांकित वायुमण्डल चन्द्रमा भन्दा तीन गुना भाग खिच्दछ ।
पूर्णिमा (पूर्ण चन्द्र) तथा अमावस्या (नयाँ चन्द्र) को दिन पृथ्वीमा विद्यमान ब्रह्माण्डको मूलभूत तत्त्व (पंचतत्त्व), उदा. मूल पृथ्वीतत्त्व, मूल आपतत्त्व और मूल वायुतत्त्व चन्द्रमातर्फ आकर्षित हुन्छ । यसले एक प्रकारको सूक्ष्म-स्तरीय उच्च दबाव क्षेत्र निर्मित हुन्छ ।
यस प्रक्रियामा स्थूल स्तरमा जब जल चन्द्रमातर्फ आकर्षित हुन्छ, तब जलको अपेक्षा जलमा विद्यमान वायुरूप घटक (जलको बाफ) जल भन्दा माथि आउछ अनि सूक्ष्म-स्तरीय उच्च-दबावको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ । अनिष्ट शक्ति मुख्यतः वायुरूप हुन्छ, त्यसैले त्यो सूक्ष्म उच्च-दबावको क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छ । यहाँ सबै एकत्रित हुन्छ अनि उनीहरुलार्इ एक-अर्काबाट अधिक शक्ति मिल्दछ । अतः ती दिनहरुमा मानवता माथि ठूलो आक्रमण गर्दछ । यी सबैको परिणामस्वरूप मनुष्यमाथि अनिष्ट शक्तिको आक्रमण शारिरीक अनि मानसिक स्तरमा तीन गुना बढेर जान्छ ।
पूरै विश्वमा फैलिएको एसएसआरएफको आश्रममा पूर्णिमा तथा अमावस्याको दिन अनिष्ट शक्तिको आक्रमण अनि सूक्ष्म-स्तरीय अनिष्ट दबावमा वृद्धि पाईछ । यो पूर्णिमा अथवा अमावस्याको पहिलो दुर्इ दिन अगाडि आरम्भ हन्छ अनि त्यस दिन (पूर्णिमा अथवा आमावस्यको दिन) अनि दुर्इ दिन पछाडि समाप्त हुन्छ ।
अमावस्याको दिन, रज-तम फैलाउने अनिष्ट शक्ति (भूत, प्रेत, पिशाच इ.), गोप्य वा अलौकिक शक्तिहरुको कर्मकाण्डमा (काला जादू) फसेको व्यक्ति अनि प्रमुखरूपले राजसिक अनि तामसिक व्यक्तिहरु अधिक प्रभावित हुन्छन् अनि आफ्नो रज-तमात्मक कार्यको लागि कालो शक्ति प्राप्त गर्दछ । यो दिन अनिष्ट शक्तिलार्इ कार्यको अनुकूल हुन्छ, त्यसैले राम्रो कार्यको लागि अपवित्र मानिन्छ । चन्द्रमाको रज-तमले मन प्रभावित हुनुको कारण भागेर जाने, आत्महत्या अथवा भूतद्वारा आवेशित (possession) हुने आदि घटनाहरु अधिक मात्रामा हुन्छ । विशेषरूपले रात्रिको समय, जब सूर्यबाट मिल्ने ब्रह्माण्डको मूलभूत अग्नितत्त्व (तेजतत्त्व) अनुपस्थित रहन्छ, अमावस्याको रात अनिष्ट शक्तिको लिए मनुष्यलार्इ कष्ट दिनको लागि स्वर्णिर्म अवसर हुन्छ ।
पूर्णिमाको रातमा, जब चन्द्रको प्रकाशित भाग पृथ्वीतर्फ हुन्छ, अन्य रातहरुको तुलनामा मूलभूत सूक्ष्म-स्तरीय रज-तम न्यूनतम मात्रामा प्रक्षेपित हुन्छ । अतः यस रातमा अनिष्ट शक्ति, रज-तमयुक्त व्यक्ति अथवा कालो जादू गर्ने व्यक्तिलार्इ रज-तमात्मक शक्ति न्यूनतम मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । तथापि, अनिष्ट शक्ति (भूत, प्रेत, पिशाच इ.) पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको फार्इदा उठाएर कष्टको तीव्रता वृद्धि गरिदिन्छ ।
आध्यात्मिक अनुसन्धानद्वारा यो पनि स्पष्ट भयो कि अमावस्या अनि पूर्णिमाको दिन मनुष्यमा हुने प्रभावमा सूक्ष्म अन्तर हुन्छ । पूर्णिमामा चन्द्रमाको प्रतिकूल परिणाम साधारणतः स्थूलदेहमा, जबकि अमावस्यामा चन्द्रमाको परिणाम मनमा हुन्छ । पूर्णिमाको चन्द्रमाको परिणाम अधिकांशत: दृश्य स्तरमा हुन्छ, जबकि अमावस्याको चन्द्रमाको परिणाम सूक्ष्म हुन्छ । अमावस्या चन्द्रमाको परिणाम दृश्य स्तरमा नहुनाले व्यक्तिको लागि यो अधिक भयावह हुन्छ । किन कि व्यक्तिलार्इ यसको भान नहुनाले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि कुनै प्रयास गर्दैन ।
पूर्णिमाको चन्द्रमाको तुलनामा अमावस्यामा चन्द्रमाको प्रभाव कम देखार्इ दिन्छ । तर अमावस्याको चन्द्रमाको प्रभाव अधिक प्रतिकूल (नकारात्मक) हुन्छ । यसको कारण यो हो कि अमावस्याको दिन मनुष्यमा चन्द्रमाको प्रभाव पूर्णिमाको चन्द्रको तुलनामा अधिक सूक्ष्मस्तरीय हुन्छ । पूर्णिमाको दिन विचारमा हुने वृद्धिको भान रहन्छ ।
जुन साधक आध्यात्मिक साधनाको छः मूलभूत सिद्धान्त अनुसार धेरै साधना गर्छ, उनी मुख्यतः स्वभावले सात्त्विक हुन्छ । परिणामस्वरूप साधारण मनुष्यको तुलनामा (जुन स्वयं रज-तमयुक्त हुन्छ), त्यसको तुलनामा वातावरणको रज-तम प्रति अधिक सम्वेदनशील हुन्छ । साधकको लागि राम्रो कुरा यो हो कि उनलार्इ अनिष्ट शक्तिबाट बच्नको लागि ईश्वर द्वारा सुविधा प्राप्त हुन्छ । कतिको आध्यात्मिक स्तर अनिष्ट शक्ति (भूत,प्रेत, पिशाच इ.) बाट बचनको लागि सुरक्षा कवच प्राप्त हुन्छ ? यो लेखको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
केही प्रारम्भिक चिकित्सकीय / मनोवैज्ञानिक अध्ययन मनुष्यमा चन्द्रमाको प्रभावको उल्लेख गर्दछन् । तर केही वर्ष पूर्व गरेको अध्ययन यस्तो सम्बन्ध दर्शाउनमा असफल रहयो । यसको कारण यो हो कि गत दशक देखि विश्वको कुल रज-तममा अभूतपूर्व वृद्धि भएर गयो । रज-तम मा भएको यसको वृद्धिको प्राथमिक कारण हो, अनिष्ट शक्ति (भूत, प्रेत, पिशाच इ.) सुनियोजन ।
राम्रो अनि नराम्रो शक्तिको युद्ध, यो लेखको सन्दर्भ लिनुहोस् ।
रज-तमको कुल वृद्धिले विश्वको सबै पक्षमा व्यापकरूपमा प्रभावित भएको छ । यसको प्रभावको व्याप्ति व्यक्तिगत स्तरमा मानसिक रोगमा वृद्धि देखि पारिवारिक कलह सम्म , आतङ्कवाद देखि प्राकृतिक आपदासम्म फैलेको छ । अमावस्या अनि पूर्णिमा मा चन्द्रमा आज पनि प्रभावित गरिरहेको छ; तर मनुष्यजाति द्वारा पूरै माहिनामा गरिरहेको कुल विलक्षण आचरणको कारण तथ्याङ्क अध्ययनमा त्यसतर्फ ध्यान जादैन ।
अमावस्या तथा पूर्णिमाको दिन चन्द्रमाको हानिकारी प्रभाव आध्यात्मिक कारणले हुन्छ, त्यसैले केवल आध्यात्मिक उपचार अथवा साधना नै यसबाट बचनमा सहायक हुन सक्छ ।
विश्व व्यापी स्तरमा यी दिनहरुमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन अथवा बिक्री गर्नबाट बच्नु पर्छ; किन कि अनिष्ट शक्ति यी माध्यमबाट प्रभाव पार्न सक्छ । पूर्णिमा अनि अमावस्याको २ दिन पहिला तथा २ दिन पश्चात आध्यात्मिक साधनामा संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि गर्नुहोस् । आफ्नो पन्थ अथवा धर्म अनुसार देवताको नामजप गर्नु लाभदायी हुन्छ अनि आध्यात्मिक सुरक्षाको लागि श्री गुरुदेव दत्त को जप गर्नुहोस् ।
चन्द्रमामो कृष्णपक्ष चरणको क्षयकालमा, अर्थात पूर्णिमा र अमावस्याको मध्यको कालवधिमा जब चन्द्रमाको आकार बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, त्यसबाट प्रक्षेपित मूलभूत सूक्ष्म-स्तरीय स्पन्दन बिस्तारै बढ्दै जान्छ । यस्तो चन्द्रमाको गाढा भाग क्रमिक वृद्धि हुनको कारण हुन्छ । त्यसैले स्वयंलार्इ रज-तमको वृद्धिको कारण हुने प्रतिकूल प्रभावबाट बच्नको लागि यस कालवधिमा साधना बढाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
चन्द्रमाको क्षय कालमा, पहिला दुर्इ हप्तामा गरेको प्रयासलार्इ न्यूनतम स्थिर राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यस प्रकारले आउने क्षयकालमा अधिक साधना गर्नको लागि पुनः प्रयास आरम्भ गर्न सक्छौं ।